Chipikiri Fungi - Vabate ASAP! | Bezzia
Susana godoy | 15/05/2021 14:00 | Welfare
Une nzwara chakuvhe here? Kunyangwe nzwara dzese dzinogara dzichitaurwa sedzinotungamira kuchinetso ichi, dzimwe nguva dzinoonekwawo pamaoko edu. Icho chinhu chinogona kutanga nenzvimbo diki uye kukanda kupinda mune chimwe chinhu chakadzika sezvo hutachiona hunofambira mberi.
Naizvozvo, zvese mutsoka uye mumaoko tinofanira kuibata nekukurumidza. Izvi hazvireve kuti inogara iri dambudziko rakakomba, nekuti kazhinji, inogona kunge iri hutachiona hushoma uye isingade kurapwa nenzira yemishonga. Nhasi tinokuudza zvese kuitira kuti iwe ugone kudzivirira, kuziva zviratidzo zvacho uyezve, vabate nekukurumidza sezvazvinogona.
1 Ungaziva sei kana ndine nzara fungus
2 Chii chaungaita kuti ubvise nzara fungus
3 Tsika dzakanakisa dzekutarisira nzara dzako
Ungaziva sei kana ndine nzara fungus
Maoko anogara achifumurwa kune ese marudzi ezvigadzirwa, tembiricha shanduko, nezvimwe. Saka isu tinogona kutaura kuti ivo vanowanzotambura zvishoma kupfuura zvatinofunga. Kutanga kubva pairi, kana iwe uchida kuziva kana uine fungus pamaoko ako, pachave paine zvimwe zviratidzo zvakakosha.
Iwe uchaona zvimwe nzara inoshanduka. Dzinogona kuoneka sechidimbu chidimbu chechimwe chemuvara chena asi inowanzoita yero. Uye kana tikairega ichipfuura, yero inoshanduka kuita brownish hue.
Uchavaona kunyanya kusimba, kupwanya uye kuti dzinotyora zviri nyore. Pamusoro peizvozvo iwo akateedzana mamakisi anotambanudzwa anogona kuoneka pavari.
Chimwe chiratidzo ndechekuti Tichavaona seakakora uye vane maumbirwo asingaenderane navo, asymmetrically.
Mune zvimwe zviitiko uye kana hutachiona huchienderera mberi, inogona kupa munhuwi wakasimba.
Chii chaungaita kuti ubvise nzara fungus
Zvino isu tava kuziva zviratidzo uye zvisati zvawedzera, zvinokurudzirwa kuzvigadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona. Kana iwe uchiri kutanga uye hutachiona hushoma, saka mishonga yekumba inouya pamberi. Nekuti navo tichawana icho chakamirirwa kwenguva refu mhedzisiro. Zviri?
Apple cider vhiniga: Nekuva nealkalakhi zvivakwa vanozogadzirisa iyo PH. Nekudaro, maitiro ayo ekushandisa aigona kuve nyore. Iwe unofanirwa kunyudza maoko ako muvhiniga uye rega igare kwemaminitsi gumi.
Garlic: Isu tinozviziva uye tinorega. Nekuti gariki ine anti-microbial zvimiro. Muchiitiko ichi, zvinokurudzirwa kupwanya mashoma egariki uye nekuisa pasiti pane yakakanganiswa nzvimbo. Chirega chizorore kwemaminitsi makumi maviri uye bvisa nemvura.
Soda yekubheka uye muto wemonimu: Tinofanira kusanganisa hafu yepuniki yebhicarbonate nemuto wehafu yemonimu kuti tiite bota. Iye zvino tichaizora zvakare pazvipikiri, tinomirira maminetsi mashoma uye kubvisa senguva dzose.
Vick Vaporub: Ehe, inojekesa kana tiine dzihwa uye ikozvino ichaporesa fungi. Iwe unongofanirwa kuisa shoma shoma zuva rega rega kunzvimbo yakakanganiswa.
Rangarira kuti mushure mekuita imwe yemishonga iyi, chinhu chinonyanya kushambadzirwa ndechekuti iwe zora kirimu inonyorovesa pazvipikiri zvako kana kuzvipa iko kukwizwa nemadonhwe emafuta yakagadzirwa nemaorivhi.
Tsika dzakanakisa dzekutarisira nzara dzako
Hapana mubvunzo kudzivirira kunogara kuri imwe yemhinduro dzakanakisa dzekutarisira zvipikiri zvedu. Pamusoro pekuve nehutsanana hwakanaka, zvakatonyanya munguva dzino, hatigone kukanganwa hydration mushure mekugeza. Kana tave kuzozvicheka, zvakanaka kuti uzviite zvakatwasuka uye kana iwe uine imwe yakajeka mhedzisiro, unogona kuibata nefaira.
Uyewo kushandiswa kwakakodzera kwema enamel kwakakosha. Zvipikiri zvinoda kufema uye kana isu tikachinja enamel vhiki rega rega, tinosarudza nzara dzenhema, nezvimwewo, zvinogona kunge zvakangoerekana zvachinja kwavari. Chii chichavaita kuti vachinje ruvara uye izvo zvinogona kuburitsa zvimwe hutachiona. Iye zvino unoziva zvakawanda nezve nzara fungus!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Welfare » Chipikiri chakuvhe: Vabate ivo nekukurumidza sezvazvinogona!
6 inoshandisa chena vhiniga yekuchenesa imba